Qayb kamid ah dadkii ku dhaawacmey weerarkii Isgoyska Zope oo Turkiga loo qaadey -SAWIRO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Qayb kamid ah dadkii ku dhaawacmey weerarkii Isgoyska Zope oo Turkiga loo qaadey -SAWIRO
Qayb kamid ah dadkii ku dhaawacmey weerarkii Isgoyska Zope oo Turkiga loo qaadey -SAWIRO
Qayb ka mid ah dadkii ku dhaawacmey weerarkii xasuuqa ahaa ee ka dhacay Sabtidii magaalada Muqdisho ayaa diyaarad ay lee yihiin ciidamada dowladda Turkigu u qaadey dalka Turkiga, halkaas oo la geyn doono Isbitaal ay ciidamadu lee yihiin.
Gawaarida gargaarka ee Anbalaaska ayaa looga soo qaadey isbitaalada Muqdisho dhaawacyada, waxaana ay ku dhawaayeen 40 qof kuwaas oo xaaladoodu aad u culus tahay. Waxaa garoonka diyaaradaha ku sugnaa Raysalwasaare Kheyre iyo qaar kamid ah golihiisa wasiirada.
Sidoo kale waxaa Muqdisho soo gaarey Wasiirka Caafimadka ee dalka Turkiga si uu u arko xaaladda. Diyaaradda Turkigu soo dirtey oo amarkeeda uu baxshey Madaxweynaha Turkiga Erdogan, ayaa sidey Dhakhaatiir iyo Kalkaaliyaal iyo weliba daawooyinka loo isticmaalo gargaarka deg-dega ah.
Tirada dhimashada ayaa weli tirakoob lagu hayaa waxaana ay hadda ku dhawdahay 300 oo qof, halka dhaawucu uu gaaraya 370 qof, tan ayaa ahayd weearkii ugu xumaa ee hal mar lagu dilo dad intaas tiradoodu le’eg tahay. Gaariga weerarka loo adeegsadey oo ahaa nooca xamuulka ayaa la sheegayaa in waxybaaha weerarka loo isticmaaley ay ka mid ahayd Gaas, kaas oo si ba’an uga qaybqaatey in dadku ku gubtaan qaraxa.